Mbola Hijanona Ho Mora Mitselatra Ihany Ve Ny Fiarahamonina Armeniana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Marsa 2016 3:39 GMT
Hetsi-panoherana tamin'ny fifidinana filoham-pirenena ny taona 2008 tany Armenia. Sary an'i Serouj tao amin'ny Wikipedia.
Tao anatin'ireo folo taona maro lasa, nisamboaravoara ambony ambany ny fomba fisainana maha-olom-pirenena ary ny fahafahana manao zavatra miaraka tany Armenia, firenena kely mitokana ao Caucase Atsimo.
Niova izany rehetra izany niaraka tamin'i Electric Yerevan, hetsika fanoherana namelana tamin'ny taona lasa, taorian'ny nanambaràn'ny Kaomisiona Mpandrindra ny Raharaham-bahoaka ao Armenia (PSRC) ny volana Jona 2015 ny vinavinany hampiakatra 16.7% ny vidin'ny herinaratra izay efa lafo amin'izao.
Ny volana Jona, olona 19 no nifamory teo amin'ny Kianjan'ny Fahalalahana, teo ambany sorabaventy hoe “Tsia ho an'ny Fandrobàna”, entiny hanondroana ny filazàna fisiana kolikoly ao amin'ny orinasam-panjakana Rosiana misahana ny herinaratra, ny Inter RAO, izay mamokatra ny herinaratr'i Armenia, sy ao amin'ireo toerana ambony ao amin'ny governemantan'ny firenena.
Faha 95 amin'ireo firenena 175 no toerana misy an'i Armenia ao anatin'ny Tondro Fijerena ny Kolikoly an'ny Transparency International. Noho izany, na teo aza ireo fivoarana, mbola aretina raikitampisaka mahazo ireo sehatra rehetra amin'ny fiainam-bahoaka sy ara-politika ny kolikoly.
Ny 22 Jona, nivadika ho fitorevahana tao amin'ny Baghramyan Avenue ireo fanaovana hetsi-panoherana, fanipazana vato tamin'ny Toeram-ponenan'ny Filoha ao Yerevan renivohitra. Ny andro taorian'io, tonga niaraka tamin'ireo tafondron-drano ny polisy, nitondra ireo olona an'arivony hafa nivoaka ho eny amin'ny fihetsiketsehana noho ny fampiasankery be loatra nataon'ny governemanta.
Araka ireo vinavina sasany, nisy olona 15.000 isa tao afovoan'i Yerevan, tanàna misy olona 1.000.000 isa, tamin'ny faratampon'ny hetsika.
#electricyerevan: jona 19-30 http://t.co/xvdPERAwA6 pic.twitter.com/xBkbka4gsc
Nangatahan'ireo mpanao hetsika ny hanafoanan'ny filoha Armeniana Serzh Sargsyan ilay fanondrotana.
Ny farany, na mbola mandray vola be hatrany avy amin'ny governemanta aza ilay orinasanà herinaratra, tsy nasiana fiantraikany tany amin'ireo mpanjifa izany fiakarana izany, nefa nambara ny fisian'ny fanarahamason'ny fanjakana amin'ireo asa ataon'ilay orinasa.
Tao anatin'ireo volana maro taty aoriana, nitohy ny fihainoana ny feom-bahoaka mikasika ilay orinasa Electric Yerevan taorian'ny nisintonana ilay fampiakàrana, miaraka tamin'ny fitakian'ny sasany tamin'ireo solontenan'ilay hetsika ny hanaovana ilay orinasanà herinaratra ho orinasam-panjakana ary hanovàna azy ho orinasan'olontsotra any aoriana.
@KarenaAv Noho ny #ElectricYerevan hitantsika fa misy ireo fomba hafa tsaratsara kokoa azo atao. Dingana iray lehibe voalohany iny.
Talohan'ny niantombohan'ilay hetsika, niaina fotoana fohy anà fifohazan'ny olompirenena i Armenia, avy eo tonga dia niverina natoritory indray.
Ho an'ny maro, hita ho fitàran'ny sehatra Fikambanana Tsy miankina amin'ny Fanjakana ny fiarahamonim-pirenena Armeniana.
Hetsika fiarahana matotra natosiky ny fitomboan'ny tsy fitokisana intsony ireo manampahefana eo amin'ny firenena.
Araka ny Ivontoerana momba ny ho Entimanana amin'ny fikarohana ao Kaokazy, ireo mpifanila vodirindrina aminy, Zorzià sy Azerbaijàna aza mbola atokisan'ireo olontsotra Armeniana kokoa noho ny governemantany.
“Azo lazaina fa liana [amin'ny Electric Yerevan] daholo ny olona rehetra, na ireo fiarahamonim-pirenena na ny politika,” hoy i Vaghinak Shushanyan, iray amin'ireo mpikatroka tamin'ilay hetsika, tamin'ny Global Voices. “Hetsika iray ara-tsosialy ilay hetsika, fa ireo fangatahana [izay nataony] kosa, napetraka nanoloana ireo mpanao politika.”
Mbola misokatra ihany ny fanontaniana hoe teboka mety hanova zavatra ve ilay raharaha Electric Yerevan sa sarintsarinà maraina vao hafa indray.
Ny volana Desambra, nisy fitsapankevibahoaka natao tany Armenia, izay 63,35% tamin'ireo mpifidy no nanao ‘Eny’ nandàny ny rafitra governemanta parlemantera nirian'ny Antoko Repoblikana ao Armenia, an'i Serzh Sargsyan, na teo aza ireo fanitsakitsahana kely vitsivitsy.
Ao tsapain-tànana ny fanoherana an'ilay fitsapankevibahoaka, ary ilay fanentanana hanao ‘Tsia’ dia manaporofo ny fisian'ny ezaka amin'ny endriny vaovao mba hanafoanana ny hafatra mavesatry ny governemanta, na tsy nahatonga hatezeram-bahoaka mitovy amin'ilay hetsika fanoherana ny fiakaran'ny herinaratra aza izany.
Taorian'iny taona 2015 feno fisavorovoroana iny, ity taona ity no mety hapetraka ho taona hamariana ny hoe hatraiza no vitan'ireo vahoaka nahazo antoka vaovao ao Armenia hanozongozonana ny governemanta sy ireo lehibe ara-politika zatra nandeha tamin'izay hitsin'ny lohany.